Fandosirana avy any Okraina, na ny fodian’ny mpampihorohoro Voatabia · Global Voices teny Malagasy
Fandosirana avy any Okraina, na ny fodian'ny mpampihorohoro Voatabia
Voadika ny 13 Avrily 2019 4:21 GMT
Nosaintsainana indray sarimihetsika malaza Rosiana Masoandro Fotsin'ny Tanihay (White Sun of the Desert). Sary namboarin'i Andrey Tselikov.
Roa taona lasa izay, saika roa taona katroka androany mihitsy, nanoratra tao amin'ny [Global Voices Report] momba ny fampiasana “mpampihorohoro voatabia” Andrei Morozov, fantatra kokoa amin'ny hoe Murz, mpanakorontana izay nahazo laza voalohany tamin'ny taona 2005 ao amin'ny RuNet aho:
“Red Blitzkrieg” was what Morozov named the tiny Stalinist-nationalist group he had founded around the time, but the phrase referred more visibly to his strategy of throwing tomatoes at political and ideological opponents.
“Red Blitzkrieg” no anarana nomen'i Morozov ny vondrona madinika nasionalista Stalinista naoriny tamin'izany fotoana izany, saingy naneho mazava kokoa ny paikadiny amin'ny fanipazana voatabia amin'ireo mpanohitra ara-politika sy ara-ideolojika ny fehezan-teny.
Tamin'izany fotoana izany, afaka roa taona katroka i Morozov vao tafiditra tao anatin'ny fahasahiranana goavana – tamin'ny taona 2007, nitifitra tamin'ny bala tao amin'ny biraon'ny FSB eo an-toerana izy, ary nampidirina am-ponja. Ohatra iray hafahafa tamin'ny endrika miverimberina tao amin'ny tontolon'ny bilaogy Rosiana sy ny hetsi-panoherana Rosiana, tamin'ny taona 2012, mbola “notorahan'i Morozov voatabia indray” ireo olona ireo araka ny efa nataony fito taona talohan'izay. Ary amin'izao fotoana izao, taona 2014 (misyelanelana roa taona indray), tafiditra anaty olana indray i Murz ary nisogandina tamin'ny vaovao, tahaka ny karazana alimanaka manara-masoandro.
Niseho tamin'ny 18 May ny antsipiriany voalohany, raha namoaka fanavaozam-baovao fohy tao amin'ny bilaoginy LiveJournal kenigtiger i Morozov: “Niverina avy any Donbass aho, tany aho nanomboka ny 11 May, ary niverina avy hatrany nandeha lamasinina aho. Fahatsapahana goavana, tsy misy fahatapahana taolana eo amiko, tsy misy fahafolahana goavana. Saingy voan'ny mangana manarona ny valahana ankavia, ary ny amin'ny tànako dia rantsan-tànana telo ankavia ihany no azo ampiasaina. ” Nanome antsipirihany bebe kokoa i Morozov rehefa namaly ireo fanehoan-kevitra tamin'ny lahatsorany, ary avy eo nanoratra fanazavana lavalava kokoa momba izay nitranga. Mahatalanjona ny tantara notantarainy, saingy tsy mahatalanjona intsony tahaka ny mahazatra tamin'ity lehilahy ity.
Nasionalista sy ara-potokevitra hiringiriny, nahazo aingam-panahy tamin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo Rosiana izay niampita ny sisintany mba hanampy ireo mpiady mpisintaka ao Okraina Atsinanana i Morozov. Ankoatra izay, dia azo inoana fa voasarik'ilay mpamaky, miaramila mpisintaka, Igor Strelkov izy, izay, tahaka an'i Morozov, toa lasa mpandimby ara-tantara. Koa dia nentanim-panahy, nanapa-kevitra ny hiampita ny sisintany ho any Okraina koa izy, nitondra ny fitaovany manokana, anisan'izany ny akanjo fiarovana amin'ny bala.
Rehefa avy nifanerasera tamin'ireo mpisintaka, na izany aza, dia nosamborina i Morozov, voampanga ho mpitsikilo, ary nampijaliana – izay loharanon'ny ratra mahazo azy. Nofatorana tamin'ny “paozy mampisy rarintsaina” izy, nahantona tamin'ny tanany nandritra ny andro maromaro. Tamin'ny farany, rehefa resy lahatra izy ireo fa mpitsikilo, dia namidin'ireo mpisintaka tamin'ny tafika Okrainiana, izay avy eo nandetika azy tao amin'ny sisintanin'i Rosia, izay nangalan'ireo mpiambina sisintany azy tao ary nentina tany amin'ny hopitaly.
Tsy ny rehetra no resy lahatra tamin'ny tantaran'i Morozov – nanamarika ny bilaogera iray fa toa mahagaga raha nipetraka sy nanoratra lavalava sy avy eo namaly ireo fanehoan-kevitra am-polony no zavatra voalohany nataon'ny olona iray avy naratra mafy ny tanany. Ny iray hafa naminavina fa mety nosamborin'ny olona iray nahafantatra ny maha-bilaogera mahery fihetsika azy i Morozov, ary noho izany faly nahita azy voasazy.
Toa tsy mitàna lolom-po ihany koa i Morozov tenany. Tamin'ny faran'ny tantarany dia nanoratra izao manaraka izao izy:
Tsy manohitra ny milisy izay nampijaly ahy tany Antracite aho. […] Ary, rehefa avy nampidina ahy teo am-pihantonana izy ireo dia nanome fitaovam-piadiana ahy, handeha hiaraka amin'izy ireo aho hiady ho amin'ny fahalalahana sy ny fahaleovantenan'ny DPR. […] Raha vao salama aho ary hanatsara ny fidiram-bolako […] dia vonona hanatevin-daharana ny milisy ary hiady ho an'ny vahoaka Rosiana ao Donbass mandra-pahalatsaky ny rà farany. Heveriko fa izany fihetsika izany no tena marina ho an'ny Stalinista sy Nasionalista Rosiana.
Stanislav Yakovlev, bilaogera Natzbol teo aloha, izay miaraka amin'i DemVybor amin'izao fotoana izao, nilaza izao manaraka izao momba ny herim-pon'i Morozov tao anatin'ny resadresaka manokana:
Eny, tsy matahotra izy, ary mahatonga ahy hanaja azy izany. Tsy afaka hilaza zavatra hafa. Ankoatra ny zava-misy fa amin'ny toe-javatra sasany, tsy ampy ny herim-po, ary mety hiteraka sazy ny fandraisana andraikitra.
4 ora izayEoropa Andrefana